Uxolo Oluncinane lwaseZulwini ngaseLwandle .
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguLesley
Ikhabhinethi ibekwe kude nesiphithiphithi sobomi bemihla ngemihla. Siselunxwemeni ngokuhamba nje phezu kweendunduma ukuya kwinto esiyibiza ngokuba lulwandle lwethu lwabucala olunembono entle engonakaliswanga yeSiqithi saseLambay kunye nommelwane wethu. iidolophu zaseRush & Skerries. Yonwabela idesika yethu enkulu ejikelezileyo enegumbi elingaphandle elimelana nemozulu.
Ikhabhini inamagumbi okulala ama-4. Ezi-3 kwezi zinebhedi ephindwe kabini kuzo zonke kwaye i-1 yazo ineebhedi ezi-2 zebhedi ukuze ikwazi ukulala 4. Igumbi lokuhlambela lineshawa yombane yamanzi ashushu kwangoko. Ikhitshi lincinci kodwa linayo yonke into yokukhupha umsebenzi onzima kwiholide yakho. Kukho i-microwave, umatshini wokuhlamba kunye ne-dishwasher. Sikwanayo ne-smart TV kunye ne-Wifi.
Siyalithanda negumbi lethu lokutyela elingaphandle elimelana nemozulu. Sinetafile enkulu ehlala abantu abali-10 ngokukhululeka kakhulu & nesifudumezi setafile ephezulu ekhupha ingqele kubusuku obupholileyo. Kukho i-trampoline kunye nenjongo egadini eyenza ilungele abantwana kunye neentsapho.
3 iibhedi ezilala abantu ababini, iibhedi ezikhweleneyo eziyi-2
Imoto iya kucetyiswa kakhulu kodwa ayibalulekanga njengoko siyimizuzu engama-20 kuphela ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseDublin kunye nemizuzu emi-5 yokuhamba ukuya kwindawo yokumisa ibhasi, eya kukuzisa kwilali yaseDonabate, enesikhululo sikaloliwe, ivenkile enkulu, ii-pubs, iindawo zokuhamba njl njl. Iiklabhu zeGalufa ezi-3 onokukhetha kuzo ukuba uyayithanda iTeeing Off
Iidolophu ezintle zaseMalahide kunye neSkerries zinokufikelelwa sisikhululo sikaloliwe saseDonabate kwaye zombini iidolophu zimi kwindawo enye kuphela.
IsiXeko saseDublin sinokufikelelwa ngololiwe okanye ngebhasi kwaye kukho imithwalo enokubonwa kwiZiko lesiXeko umzekelo. IKholeji yeTrinity apho unokubona iNcwadi yeKells, iNqaba yaseDublin, iMyuziyam ye1916 kwiGPO. Indlu yeGuinness Hop kunye neJameson Distillery.
Kwaye siyimizuzu engama-90 kuphela ukusuka eBelfast apho ikhaya lakhe lisiya kwiMyuziyam yeTitanic ekufanele ukuba sityelelwe.
Mna kunye nosapho lwam sibambe indlwana yethu. Sitsalela umnxeba kuphela kwaye sihlala kufutshane ukuze sinikeze naluphi na uncedo olufunekayo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Portrane